शङ्कैशङ्काले लङ्का हान्नसक्छ- हृदयेश त्रिपाठी | Madhesi - United We Stand
शङ्कैशङ्काले लङ्का हान्नसक्छ- हृदयेश त्रिपाठी
December 21, 2006 at 4:56 pm Leaveacomment
शङ्कैशङ्काले लङ्का हान्नसक्छ– हृदयेश त्रिपाठी, महामन्त्री, नेसपा (आ) एवं मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
– महेन्द्र पाण्डेय
० यतिका समय लगाएर ल्याइएको अन्तरिम संविधानको हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नुको सट्टा तपाईंको पार्टी त आपत्ति जनायो नि, के कुरामा चित्त बुझेन
– संविधानसभाको सर्न्दर्भमा सबैभन्दा बढी महत्व निर्वाचन प्रणालीले राख्छ । ‘जसरी पनि गराइहाल्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकताका साथ संविधानसभा हुनुहुँदैन । संविधानसभा परिवर्तनको एउटा ठूलो माध्यम र औजारको रूपमा हुनुपर्छ । र्दुइ सय अठतीस वर्षेखि राज्यको बनावट विद्यमान छ, त्यसैले अब सबैको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन हुनुपर्छ । तर यहाँ जुन किसिमले र्दुइ सय पाँच सिटको कुरा आयो यो भेदभावपूर्ण छ । यो जनसङ्ख्याको आधारमा छैन भन्ने कुराको हामीले लडाइँ लडेका हौं । हामी के चाहन्छौं भने जनसङ्ख्या भौगोलिक र सांस्कृतिक एकरूपताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्विभाजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । हामीले त सबै समानुपातिकमा लैजानुपर्छ भनेर आफ्नो मान्यता प्रस्तुत गरेका थियौं । अहिलेसम्म यहाँका दलित, मधेशी, जनजाति र महिलामा ‘देश त हाम्रो हो तर राज्य होइन’ भन्ने सोच विद्यमान छ । यसका लागि हामीले निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेकाले यही निर्वाचन क्षेत्रलाई स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन । अर्को कुरा सङ्घात्मक र एकात्मकको कुरामा हामीले जोड दिएका थियौं । एकात्मकको कुरामा सहमति बन्यो तर सङ्घात्मक कुरा राख्नमा सहमति हुन सकेन । हामीले राज्यको पुनर्संरचना सङ्घात्मक आधारमै हुनुपर्छ भन्ने निचोड निकालेका छौं ।। तेस्रो कुरा भनेको भूमिसुधारको विषयमा हो । भूमिसुधारको विषयमा तीतो अनुभव मधेशीलाई छ । मधेशका मान्छेहरू भूमिसुधारको नाम सुन्नासाथ हदबन्दी भन्ने बुझ्छन् । राजा महेन्द्रको पालादेखि नै भूमिसुधारको नाममा एउटा कुरूप प्रयोग भएको छ ।। त्यसबेला हदबन्दी त गरियो तर त्यसबाट निस्किएको जग्गा स्थानीय भूमिविहीनलाई नदिएर बाहिरबाटै मानिस ल्याई जग्गा दिएर बसाल्ने काम गरियो । वनजङ्गल फँडानी गरेर पनि सुकुम्बासीको नाममा बाहिरबाट मान्छे ल्याएर बसाल्ने काम गरियो । त्यो जग्गा कमैयाहरूलाई दिइएको भए त कमैया प्रथा नै रहँदैनथ्यो । राज्यको नराम्रो सोच र दुर्व्यवहारका कारण हामी भूमिसुधारका विषयमा र्सतर्क रहेर भनेका हौं । भूमिसुधारका विषयमा हाम्रो मान्यता के छ भने भूमि सङ्घीय राज्यको विषय हो । भूमिसुधार भनेको हदबन्दी नै हो भन्ने मान्यता यदि सबैको हो भने त्योचाहिँ संविधानसभाको विषय हो तर अन्तरिम संविधानको विषयवस्तु होइन । सङ्घीय राज्यको विषयवस्तु हो । आ-आफ्ना स्रोतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय राज्यहरूको अधिकार क्षेत्रको भएको हुनाले संविधानसभाको विषयवस्तु यसमा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन । भूमिबाट कृषिक्रान्ति गर्दै औद्योगिक क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकोले यी तीन विषयमा हाम्रो पार्टी फरक मत दर्ता गरी र्सार्वजनिक गरेका हौं ।
० समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईंलाई यो संविधान कस्तो लागेको छ ?
– समग्रमा भन्नुपर्दा त यो संविधान युगान्तकारी नै छ । परिवर्तनदायी छ र यसले सामन्तवादको अन्त्य तथा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । तर हामीले जुन फरक मत प्रस्तुत गरेका छौं त्यो पनि त्यसमा समावेश गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
० के अब नेपालबाट राजा वा राजतन्त्रले बिदा पाउन लागेकै हो त ?
– कुनै पनि संस्थाले जनताको मनमस्तिष्कबाट बिदा पाएपछि बिदा पाउने रहेछ । चाहे राजा होस् चाहे राजनीतिक पार्टी जनताको मत अहिले राजतन्त्रको पक्षमा छँदै छैन । त्यसकारण तपार्इंको प्रश्न सही हो ।
० कतिपयले त काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न संस्कृति तथा प्रचलन चलाउनका लागि मात्र पनि राजा नभई नहुने जिकिर गर्न थालेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– उपत्यकामा भएका भोटेजात्रा र घोडेजात्राको मात्र कुरा गरेर भएन, यहाँ अरू पनि थुप्रै संस्कृतिहरू छन् । सबै संस्कृतिले आ-आफ्ना मान्यता खोजिरहेको अवस्थामा सबै संस्कृतिलाई मान्यता दिने हिसाबले अन्तरिम संविधान आएको हुनाले त्यो पीडा कसैले गरेका छन् भने त्यो निर्रथक पीडा हो ।
० राजाले चलाउँदै आएका कामहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा थोपरिएको छ, यसले गर्दा प्रम अनावश्यक भारको मारमा पर्दैनन् र ? किनकि प्रमको कार्यालयलाई त्यसअनुरूप चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन त सकिएको छैन, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– अब जनताको छोराले मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर जो पाएको छ यो गर्वको विषय हो । जहाँसम्म चुस्ती दुरुस्तीको कुरा छ समयले सबै ठीक पार्दै लानेछ ।
० अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयन अवरोध आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
– यसका विरुद्धमा षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् । षड्यन्त्रको सम्भावना पनि छ । तर, आठ दलको एकताले त्यसलाई चिर्दै जान्छ र जनताको सजगता पनि त्यत्तिकै भएकोले षड्यन्त्रकारीहरू सफल हुन पाउँदैनन् भन्ने लाग्छ ।
० भारतीय विदेशमन्त्रीको अकस्मात भएको नेपाल भ्रमणको खास कारण के रहेछ, बताइदिनोस् न !
– उहाँको भ्रमण पहिला नै तय भएको हो आकस्मिक होइन । उहाँ र्सार्क सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणा गर्न आउनुभएको हो । एउटा संयोग भनौँ या अवसर के जुट्यो भने एक दिनअगाडि हामीले लामो छलफलपछि अन्तरिम संविधानमा सहमत भएको दिन परेको थियो । आठ दल सहमत भएर संविधान आएकोमा उहाँले बधाई व्यक्त गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो ।
० भारत त अझै पनि नेपालमा राजा वा राजतन्त्र जोगाइराख्न चाहन्छ भन्ने कतिपय विश्लेषणहरूको ठहर छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ ?
– प्रणव मुखर्जीले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो नै भारतको अडान हुने बताउनुभयो नि ! त्यही कुराले प्रस्ट हुनुभएन र भारतले के चाहँदोरहेछ भनेर । हाम्रा विश्लेषकहरूले के भन्छन्, के आधारमा भन्छन् उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो ।
० मधेश र मधेशीको हितका नाममा खुलेका पार्टी तथा समूहहरूले तर्राईबाट पहाडेलाई खेद्ने अभियान नै छेड्न थाले नि, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने राज्यको बनावट वा चरित्र जुन छ त्यसबाट मुक्ति पाएर मधेशले परिवर्तन खोजेको छ । यसले समानुपातिक भूमिका पनि खोजिरहेछ । यसलाई यदि इन्कार गरियो भने अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसकारण यो भावनालाई बुझेर राज्यको रूपान्तरण गर्नुपर्‍यो । देशका अन्य भू-भागहरू द्वन्द्वको समाप्ति वा वार्तापश्चात् अब सन्तुलित हुन थाले । मधेश अझै पनि तातो देखिएको छ । अझै पनि मधेशमा तरङ्ग उठिरहेका छन् । त्यो तरङ्गित मधेशले आफ्नो उचित हिसाब खोजिरहेछ ।
० यसको मतलब अहिले मधेशमा भइरहेको गतिविधिप्रति तपाईंको पनि र्समर्थन छ ।
– म शान्तिवादी मान्छे हुँ, दुइपटक अनशन गरेको मान्छे हुँ । शान्तिपूर्ण सङ्र्घष हाम्रो पार्टीको निष्ठाको विषय हो । हामी लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्र्छौं । त्यहीअनुरूप हामी अगाडि बढिरहेका छौं । तर मधेशमा अहिले जुन ढङ्गका आवाजहरू आइरहेका छन्, त्यसले कहीं-कहीं कुनै-कुनै रूपले मधेशको अवस्थाको चित्रण गरेको छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।
० अहिले देशका पूर्वी भागका केही जिल्लामा पहाडेका गाडीहरूसमेत चल्न दिइएको छैन, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– हाम्रो पार्टी गैरलोकतान्त्रिक सङ्र्घष र सशस्त्र सङ्र्घषलाई मान्यता कहिल्यै दिँदैन । मधेशको भावनाको अभिव्यक्ति विभिन्न रूपले आइरहेको छ । हरेक रूपलाई हामीले र्समर्थन गर्र्छौं भन्ने छैन तर पनि विभिन्न रूपले मधेशले आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहेकै छ । समग्र रूपलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
० तपाईं राज्यको मन्त्री भएर पनि बढी मधेशको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ नि, किन ?
– मेरो पहिचान मधेश हो । मधेशीको प्रतिनिधिका रूपमा म मन्त्री बनेको हुँ । समग्र देशका लागि कुरा उठाउनेहरू थुप्रै छन् तर मधेशका लागि लड्नुपर्दा हामी एक्लै पनि भएका छौं ।
० शान्तिसम्झौता भइसकेपछि पनि माओवादीको व्यवहारमा सुधार नआएको गुनासो चौतर्फी सुनिन थालिएको छ, तपाईंले के बुझ्नुभएको छ ?
– माओवादी एउटा छुट्टै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको दल हो । सशस्त्र सङ्र्घषबाट आएको विद्रोही हो ऊ । व्रि्रोहीले लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ । सङ्क्रमणकालबाट मुलुक मात्र नभएर माओवादी पनि गुज्रिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ लोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण हुन । यो सङ्क्रमणकालमा हिजोका गतिविधिमाथि पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू सुध्रिंदै जानेछन् र उनीहरू रूपान्तरण हुनैर्पर्छ ।
० हतियार व्यवस्थापन गर्ने कार्य त केही समय लम्बिन्छ नै होला, त्यसअघि माओवादी सरकारमा आउने सम्भावना छ-छैन ?
– पहिलो कुरा त हतियार व्यवस्थापन कार्य लम्बिन्छ भन्ने मान्न म तयार छैन । किनकि हामीले ६ महिनामा गरेको कामलाई आज देशी र विदेशीहरूले चमत्कारको संज्ञा दिएका छन् । हरेक कदमकदममा हामीले गर्ने कामको बारेमा अविश्वास गरिन्थ्यो । अब भने सबैले विश्वास गर्न थालेका छन् । नेपालीहरू त आफ्नो समस्या आफैं बसेर सुल्झाउन र मिलाउन सक्दारहेछन् भनेर हाम्रोबारेमा चासो राख्ने मित्रहरूले भन्न पनि थालेका छन् । हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका विशेषगरी नेकपा माओवादीको पक्षबाटै खोजिएको हो । त्यसमा सात दल र सरकारले इन्कार नगरी सहमति जनाएका हुन् । त्यहीअनुरूप सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र पठाएको हो । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाले गर्दाखेरी ढिलो-चाँडो हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । हतियार व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । हुनत यहाँ अनेक शङ्का-उपशङ्का गरिँदै पनि छ तर शङ्काले लङ्का हान्नसक्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यत्तिकै बुझ्न जरुरी छ ।
० शान्तिसम्झौता सम्पन्न गर्ने बेलामा गाउँ जनसरकार र जनअदालत विघटन गर्ने सहमति भएको थियो तर अहिले त माओवादीको जिम्मेवार पक्षबाट नै अन्तरिम सरकारमा नगएसम्म यथावत् रहने भनिएको छ, यसलाई सात दल र सरकारले कसरी लिएको छ ?
– त्यो गलत अभिव्यक्ति हो । शान्तिसम्झौतामा सबै भङ्ग गर्ने सहमति भएर मात्र हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पालना गर्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौं । सम्झौताको पालनाले मात्र आउँदा दिनहरूका लागि विश्वासको ढोका खुला हुने हुँदा माओवादी पक्षले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ । हामीलाई आशा छ जसरी सरकारले पालना गरेको छ त्यसैगरी उनीहरूले पनि गर्नेछन् ।
० विगतमा हटाइएका प्रहरीचौकीलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा माओवादीले पुर्‍याएको अवरोधलाई सरकारले कसरी लिएको छ, के यसैगरी टुलुटुलु हेरेर सरकार बस्ने हो त ?
– प्रहरीचौकी राख्न नदिने जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ यो अत्यन्तै गलत कार्य हो । यो शान्तिसम्झौताको पूर्ण उल्लङ्घन हो । सरकारले यो कुरा उचित माध्यमद्वारा नेकपा माओवादी पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ र आफ्नो चिन्ता र चासो पनि प्रकट गरेको छ । यस्तो किसिमको बाधा-अवरोध नगर्ने भनेर माओवादी नेताहरूले वचन दिइसक्नुभएको छ ।
० जेठसम्ममा संविधानसभापको चुनाव हुन सक्ने कुरामा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– हामी अत्यन्तै क्रियाशील किसिमबाट जेठसम्ममा चुनाव सम्पन्न गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषद्ले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नेदेखि अन्य कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।
० संविधानसभा हुन नदिनका लागि दरबारिया शक्तिहरूको चलखेल होला कि नहोला, के देख्नुभएको छ ?
– कोसिस गर्दैनन् भनेर इन्कार गर्न सक्दिनँ । धेरै कुनाबाट धेरै प्रकारका षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् । त्यसलाई चिर्नका लागि हामीबीचको एकताको गाँठो अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
० प्रसङ्ग बदलौं, तपाईंको कार्यकालमा आयल निगममाथिको ऋणभार निकै नै कम भएको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
– घाटा अलि कम भएको हो तर जुन हाम्रो बक्यौता छ त्यो त बढेकै छ । मेरो कार्यकालमा बढेको नभएर पुरानै हो । इण्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम अझै पनि बढी नै छ । दश अर्बभन्दा बढी नै भइसकेको छ । यसलाई कसरी तिर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार चिन्ताका साथ लागेको छ । अहिलेसम्म आयल निगम ऐनबेगर चलेको थियो, कुनै कानुन थिएन । त्यसकारण हरेक सरकारले आफ्नो इच्छामुताबिक चलाउने गरेका थिए । मैले ऐनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेको छु । यसका लागि संसद्मा समेत ऐन र नीति बनाउनका लागि पेश गरेको छु । त्यहाँ लेखापरीक्षण पुरातन शैलीको थियो, अहिले दुइजना चार्र्टर्ड एकाउण्टेण्ट राखेपछि व्यवस्थित भएको छ । क्रम अझ बढ्दो छ । आयल निगमको आर्थिक पक्षलाई मैले बढी ध्यान दिएकै हुँ, लेखा समितिको अनुभवले गर्दा सक्रिय भएर लागेको छु ।
० मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिएका बेला सरकारको एक जिम्मेवार मन्त्री बन्ने मौका तपाईंले पाउनुभयो, अहिले आफूमाथिको जिम्मेवारी कति पूरा गरेजस्तो लाग्छ र आफ्नो कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– जनान्दोलनको म्यान्डेटअनुसार या जनताले दिएको जनादेशअनुसार यो सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारको एउटा अङ्ग र सदस्यका हैसियतले म सन्तुष्ट छु । शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउनमा र संविधानसभामा पुर्‍याउनमा आफूले गरेको कामबाट म सन्तुष्ट छु ।। यो सरकारको दायित्व पनि त्यही हो । मन्त्रालयगत कामहरू अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला । प्रशासनिक यन्त्रको जुन बनावट छ यसलाई अझै पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । प्रशासन यन्त्रको यही गति र यही बनावटबाट चाहिं धेरै हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्न ।
बस्ती-बस्तीबाट उठे	Put out this fire